University of Freiburg - Waxbarashada Bro
gaabinta : ALUF
aasaasay : 1457
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Freiburg
Qor at University of Freiburg
The University of Freiburg , si rasmi ah ugu Albert Ludwig University of Freiburg waxaa jaamacadda cilmi dadweynaha ku yaalla Freiburg im Breisgau, Baden-Wurttemberg, Germany.
Jaamacadda waxaa la aasaasay bishii 1457 by Kooriya Habsburg sida jaamacadda labaad ee territory Austria-Habsburg ka dib markii University of Vienna. maanta, Freiburg waa jaamacadda ugu da'da weyn shanaad-ee Germany, la dhaqan dheer oo baraya aadanaha, cilmiga bulshada iyo sayniska dabiiciga ah. Jaamacadda wuxuu ka kooban yahay 11 kulliyadood oo soo jiidata arday ka guud ahaan Germany iyo sidoo kale in ka badan 120 dalalka kale. Ardayda ajinebiga oo ka koobnaan ku saabsan 16% wadarta tirada arday.
Magacaabay mid ka mid ah jaamacadaha sare ee Germany by aqoonyahano, wakiillada siyaasadeed iyo warbaahinta, Jaamacadda Freiburg taagan mida hay'adaha cilmi-baarista iyo waxbarashada sare ee Yurub. Iyada oo ay sumcad dheer-taagan of heer sare, jaamacadda u yihiin in la soo dhaafay u muuqataa, si ay u ilaaliyaan oo ay dhaxal ahaan tacliinta iyo dhaqanka taariikhi ah, iyo in ay mustaqbalka, horumarinta hababka cusub iyo fursadaha si loo daboolo baahiyaha dunida a beddelo. The University of Freiburg ayaa guriga ahayd in qaar ka mid ah maskaxda ugu weyn ee dhaqanka reer galbeedka, oo ay ku jiraan tirooyin qudbad sida Martin Heidegger, Hannah Arendt, Rudolf Carnap, David Daube, Johann Eck, Hans-Georg Gadamer, Friedrich Hayek, Edmund Husserl, Friedrich Meinecke, iyo Max Weber. Intaa waxaa dheer, 19 Laureates Nobel ayaa la xiriir la leh Jaamacadda Freiburg iyo 15 aqoonyahano ayaa lagu sharfay abaalmarinta cilmi German ugu sareeya, ka Gottfried Wilhelm Leibniz Prize, halka ka shaqeeya ee Jaamacadda Freiburg.
Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Dabeecadda Sciences
Kuliyada Deegaanka iyo Khayraadka Dabiiciga
bilowga (15th Century)
In 1457 Cathedral Freiburg ahaa site oo ka mid ahaasaas ee jaamacad. The maalgeliyaha iyo tirada kii ka dib markii hay'adda ayaa loo magacaabay ahaa Archduke Albert VI, of dowladnimadiisu, Western Austria, Freiburg markaas ahayd qayb ka mid ah. The "Albertina" waxaa la aasaasay sida a jaamacadda oo dhamaystiran, oo ay ku jiraan dhammaan kulliyadaha muhiim ah markii ugu: Theology, Law, Medicine, iyo Philosophy. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu baro fiqiga yar iyo maamulka. Qaar ka mid ah ardayda ugu horeeyay ee ku noolaa "Bursen" (hostels) on goobta of waxa hadda loo yaqaan "Old University,"Halkaas oo muxaadarooyin ugu horeysay ayaa sidoo kale ka dhacay. Fasallada lagu qabtay Latin.
Tiro ka mid ah si fiican u yaqaan humanists bartay oo wax ku baray jaamacadda Freiburg ee. Waxay ahaayeen heegan u ah hadafyada waxbarashada iyo dulqaad iyo fahamsan yahay war abuurashadoodii saxaafadda daabaco sida signal a. Mid iyaga ka mid ahaa MartinWaldseemüller, qofka ugu horeysay ee ay u isticmaalaan magaca "America" ​​ee qaaradda dhawaan helay in khariiradda uu dunida. Toobad ahaa mawduuc ka mid ah dood kulul at the University of Freiburg, masuuliyiinta ugu dambeyntii maciin bidi galaya iyo daacad u Austria. Dabaqadda sare iyo ganacsade kuwaas oo wiilashoodii bay u jaamacadda diray si ay isugu diyaariyaan xirfad diblomaasiyadeed ama military galbiyey in isbedelka cusub: Faransiis noqday caan ah, jaamacadda kiraystay dayrka iyo cayaar macalimiinta.
Qarnigii 17aad waxaa lagu calaamadeeyay by tartan ka dhexeeya oo qiranaya ah. In 1620 taliyayaashii Catholic soo bandhigayJesuit Order at Caqlina fiqiga iyo culuumta. Inkastoo si la arkaa casri ah oo xoog badan ee waxbarashada, saamaynta ay sidoo kale keentay in xayiraad daran manhajka. Jesuits ayaa soo bandhigay masrax u University of Freiburg oo wuxuu u xoogaystay xeerkii doodo (Imisa Malaa'igta haboon caaradda irbad?). Dhismaha maanta loo yaqaan "Old University" (ka dib markii ay burburinta ee dagaalkii labaad ee dunida iyo dib u dhiska ku xiga) waxaa markii hore la dhisay by Jesuits ka sarreeyey Dabcan ee tobanaan sano oo waxay u adeegeen sidii ay college fiqi ahaaneed.
habeeynta (18th Century)
Maamulka dowladda iftiimiyey baahnaa ah mar walba sii kordheysa addoommo sokeeye la xirfado wax ku ool ah, iyo fasalada sare dalbaday waxbarashada xirfadeed. In 1768 Maria Theresa sidaas bandhigay dibuhabaynta ballaaran oo cabburin madaxbanaanida maaliyadeed ee hay'adaha waxbarasho ee boqortooyadiisa ka, oo ay ku jiraan University of Freiburg. dibuhabaynta ayaa kordhay tartanka ka mid ah ardayda ay ku daray baaritaano dheeraad ah, koobnayn dhererka semester biririf, soo bandhigay buugaag casri ah iyo qalabka wax ku ool ah, iyo bedelay qaab waxbarashada ee akhriska, isakoo ka buugaagta la muxaadarooyin sharaxaadda - in Jarmal. In 1773 Pope ka kala diri Order Jesuit (ku meel gaar ah) oo ka jawaabaya hanjabaadda ka dalal badan, iyo college fiqi ahaaneed ee Bertholdstraße la siiyey jaamacadda.
Sidaas darteed of Wars Napoleonic ah, gobolka Breisgau ay u Grand Duchy ee dhacay Baden in 1805. Isla mar ahaantaana, Jaamacadda Freiburg galbeed badiyay dhamaan hantida ay of Rhine ah, oo waxaa iyaga la qayb weyn oo ay dakhli. Louis waxaan, Grand Duke of Baden, diyaarin hibeynta ah jaamacadda ee 1820, sidaas hubinta jiritaankeeda sii. In mahad, Jaamacadda magaceeda ilaa "Alberto-Ludoviciana" bedelay oo lagu sharfayo labada awowayaashood ay aasaasay. Sidoo kale in sannadahan, shirkadaha ardayga marka hore la sameeyey in la ruxruxo ah xamaasad u sabab ah iyo hadafyada dimuqraadi waxyoonay by Revolution Faransiis ah. Si kastaba ha ahaatee, Rajadii ay jamhuuriyad ayaa ugu dhakhsaha badan dhulka lagu kacaanka lagu hoobtay ee 1848. Laga bilaabo 1850 diiwaangelinta bilaabeen inay soo baxaan, ugu dhakhsaha badan lagu gaarey 1500. The cilmiga campus dabiiciga ah waxaa la dhisay inay meel diiwaangelinta kordhay.
farqiga (20th Century)
In 1900 Jaamacadda Freiburg bilaabay dumarka waxbarashada qirtay - sida jaamacadaha ugu horeysay ee Germany. In 1902 Maktabadda cusub ee University oo la furay (ee waa waxa maanta dhismaha jaamacadda IV), iyo in 1911 cusub ee dhismaha weyn ee jaamacadda(dhismaha jaamacadda maanta waxaan) waxaa ka go'an, bixinta meel ka 3000 ardayda hadda ka diiwaangashan. munaaraddii ee dhismaha weli ku jira "Karzer,"Qol lagu hayo kaas oo ardayda ayaa Buruundi oo qufulan sida Cadaab. mudnaan waxaa la mamnuucay in 1920. In isla sanadkaas, Medical Center University cusub albaabbadeedii oo furay on Hugstetter Strasse.
On dabaqa sare ee dhismaha jaamacadda, waxaan weli waa Taalladaas ardayda iyo shaqaalaha jaamacadda, kuwaas oo ka mid ah dhibanayaasha labadii dagaal aduunka ahaayeen. In wadnaha ee dhismaha, isla, in deyr ugu weyn, jaamacadda taagay a xusuus in 2005 xusayey ku dhowaad ah 400 shaqaalaha loo yaqaan iyo ardayda ee Jaamacadda Freiburg kaasoo soo gaaray dhimasho, masaafuriyo, ama takoorka daran xukunkii Socialist Qaranka. Si kastaba ha ahaatee, dhibanayaasha kale oo badan ayaa weli la magacaabin: In ka badan 1500 qof ayaa loo xilsaaray hawl xarunta caafimaadka, halkaas oo sidoo kale waa caddayn of waxqabadyo caafimaad dembiyada. Jaamacadda raaceen amarka hantiwadaagnimadu Qaranka, waqtiyo xataa Xukuntay. ballan Martin Heidegger ee sida Raktarka ee jaamacadda ee 1933, tusaale ahaan, loo dabaal sida a "wareegay." Heidegger ma faallo doorkiisa Raktarka ee jaamacadda ilaa dhimashadiisii 1976.
Dhawr ka mid ah Professor Freiburg ee, ay ka mid yihiin Walter Eucken, iyo sidoo kale naagahooda, ahaayeen xubno ka mid ah mucaaradka.
La socoto magaalada oo dhan gudaha ee Freiburg, dhammaan dhismayaasha jaamacadda ayaa burburay ama ku baabba'day, 1945. Jaamacadda ahaa kara inuu wax badbaadiyo 75% qalabkan ka holaca, inta badan buugaagta. By dayrta ee isla sanadkaas, masuuliyiinta shaqo Faransiis mar hore la siiyay ogolaasho loogu talagalay dib u dhiska iyo furin oo ka tirsan Jaamacadda Freiburg. Ka hor inta edabiga, arday kastaaba wuxuu lahaa in ay ku riday 100 saacadood oo shaqada buuga si ay u caawiyaan ladib u dhiska dadaalka.
Ilaa 1949 nidaamka denazification fuliyay waayo, dhammaan shaqaalaha jaamacadda, laakiin aan ka badnayn toban sano ka dib ku dhawaad ​​oo dhan, kuwaas oo shaqada laga eryay ayaa mar kale ka shaqaynayay jaamacadda. Iyadoo dhalashada ka mid ah dagaalkii qaboobaa, fikraddiisa ah anti-communist ahaa bayaan loo arkaa ka muhiimsan ka mid ah dabeecadda inta lagu guda jiro marxalad Socialist Qaranka. Jaamacadda khibrad xaami ah ee sannadahan: In 1957, on the University of guuradii 500aad ee Freiburg, Dastuurka cusub ayaa la ansixiyay. dib u dhiska ayaa waxaa ku dhawaad ​​la buuxiyo by waqtigan, dhulka la jebiyey, waayo, dhismayaasha cusub sida jaamacad dhismaha II, iyo jaamacadda haatan lahaa guud ahaan 10,000 ardayda.
Ma ilaa 1968, markii dibad ardayga ee Berlin iyo Frankfurt gaareen Freiburg, ahaa farcanka oo Nagaadeen awood aan la dhexgelin tan iyo markii dagaalka la is waydiiyo. The ardayda iyo qayladii dagaalka ahaa: "Under saarto ah, Muff of a kun oo sano " ("Under saarto ah, urayaa ee kun sannadood "). ardayda ayaa dalbaday in adimuqraadiyeynta ee jaamacadaha, haysta weerarada iyo baro-tago iyo dhiibteen baxay flyers si ay u taageeraan yeel. dibad Ardaygu wuxuu bilaabay Isbadal dhaqan.
The sano ee soo socda arkay ballaarinta oo ka mid ah Kulliyadda Daawada iyo cilmiga dabiiciga ah. In 1995, Kuliyada Engineering la aasaasay, sii ballaarin spectrum ee nidaamo lagu bixiyo jaamacadda. By dhamaadka qarnigii, horay waxaa jiray 20,000 ardayda matriculated at the University of Freiburg. Waxbarashada iyo cilmi-baarista ah ayaa uga faa'idaan sarrifka caalamiga ah iyo ku riyaaqay sumcad wanaagsan dibadda. Tani waxaa laga arki karaa tirada sii kordhaysa ee ardayda caalamiga ah iyo cilmi-yar, kuwaas oo u yimid inuu Freiburg si ay u bartaan aqoon dheeraad ah.
abaalmarino (21st Century)
In 2007 Jaamacadda Freiburg noqday mid ka mid ah sagaal jaamacadaha ugu sareeya Germany in la murwayn ee Excellence Initiative ay cilmi.
The University of Freiburg ka mid ah ku guuleysatay ee wadanka oo ahaa "Teaching wanaagsan"Tartanka in 2009. Abaabulan by Shirka Joogtada ah ee Wasiirrada Waxbarashada iyo Arrimaha Dhaqanka iyo Stifterverband ee Sayniska Jarmal iyo Research, tartanka aqoonsan fikradaha cusub waxbarashada.
The Award Teaching State, shirka sanad walba fikradaha lagu fuliyey waxbarashada ee hay'adaha waxbarashada sare ee Baden-Wurttemberg, ayaa sidoo kale si joogto ah u aadeen macalimiinta ee Jaamacadda Freiburg tan iyo markii ugu horeysay waxaa la qabanqaabiyaa 1993.
Kuwan oo dhan abaalmarino iyo maaliyad ay soo saaraan gacan ka University ee Freiburg ee gool ee dayactirka ku laayeen tartan ee muuqaalkii waxbarashada sare ee dalka Jarmalka.
In 2007 Jaamacadda Freiburg dabaal 550-sanad guuradii iyadoo in ka badan 300 dhacdooyinka dadweynaha. Dhowr mashruuc oo qaabayn doonaa horumarinta dheeraad ah oo jaamacadda ayaa bilaabay inta lagu guda jiro xaflado ah.
In 2007 jaamacadda furay Uniseum, matxaf diiwaangalinta taariikhda jaamacadda iyo gole dhacdooyinka, iyo sidoo kale UniShop.
Guddiga Trustee-ah 2007 dabaal guuradii xoogaysataan "New University Endowment."Waxaa loo qorsheeyay in ay maaliyad siiyaan professorships cilmi, macalimiinta booqasho caalami ah, iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda u fiican.
Ugu dambeyntii, in 2007 Jaamacadda Freiburg ayaa sidoo kale lagu qabtay ugu horeeyay Curinta iyo Dialog weydaarsi. seminaaro ayaa hadda khubarada ka jaamacadda iyo hay'adaha dibadda la isugu keeno ku saabsan sano hal mar, tusaale ahaan si ay u horumariyaan fikradda casri ah jaamacad ama aragti ah 2030.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Freiburg ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Freiburg rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Freiburg
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Freiburg.